खुसिको खबर : नेपालमा आज मात्रै १०६ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुसिको खबर : नेपालमा आज मात्रै १०६ जनाले कोरोना जितेर घर फर्के !
बितेको २४ घण्टामा १०९ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार १०९ संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ। शनिबार थपिएको सहित नेपालमा संक्रमित संख्या १८ हजार ४८३ पुगेको छ। बितेको २४ घण्टामा चार हजार ७५ जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। शनिबार १०६ जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म १३ हजार ५३ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्।
अर्थात् संक्रमित मध्ये ७०.६ प्रतिशत निको भएर घर फर्किएका छन्।मन्त्रालयका अनुसार, रौहतहट, कैलाली र बाजुरामा पाँच सय भन्दा बढी संक्रमित उपचारत छन्। पाँचथर, भोजपुर, संखुवसभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा भने संक्रमित शून्य बनेको छ।
अर्कोको समाचार ,कोरोना भाइरसले रुप परिवर्तन गरिरहेको वैज्ञानिकहरुको दावी – बेलायतका वैज्ञानिकहरुले विश्वभरी ६ लाख भन्दा धेरैको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरसले रुप परिवर्तन गरिरहेको महत्वपुर्ण खुलासा गरेका छन् । कोरोना भाइरसमा हुने यस परिवर्तनले मानवलाई खोप बनाउन मद्दत मिल्न सक्ने वैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले गरेको एक नयाँ शोधबाट नयाँ कोरोना भाइरसका केही म्युटेशन मानवको इम्युनिटी सिस्टमसँग सम्बन्धित त्यो प्रोटिनबाट दिशा निर्देशित छ जसले यसलाई कमजोर गर्न सहयोग गर्छ । तर भाइरस यसको विरुद्ध पुन सक्रिय हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुले बताए । यो खोजले कोरोना भाइरस समाप्त पार्न नयाँ खोप तयार गर्नमा सहयोगी हुन सक्ने बताइएको छ ।
बेलायतको युनिभर्सिटी अफ बाथका एलन राइस सहित अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार जब सबै जीवधारी उत्परिवर्तन अर्थात रुपमा परिवर्तन हुन्छ , त्यसबेला यो प्रक्रिया सामान्य रुपमा आकस्मि हुने गर्छ । तर कोरोना भाइसरको मामिलामा म्युटेसनको प्रक्रिया आकस्मिक नहुन सक्छ र मानव यसलाई कमजोर गर्नका लागि रक्षा तन्त्रका रुपमा म्युटेसन गरिरहेको अध्ययनमा बताइएको छ ।
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित यो अध्ययन चर्चित अखबार मलेक्युलर बायोलोजी एन्ड इभोल्युसनमा प्रकाशित भएको हो । वैज्ञानिकहरुले विश्वभरी १५ हजार भन्दा धेरै भाइरस जीनोमको आंकलन गरि ६ हजार अधिक म्युटेसनको पहिचान गरिएको छ । युनिभर्सिटी अफ बाथका मिलनर सेन्टर फर इभोल्युसनका निर्देशक लरेन्स हस्र्टले भने – हामी भाइरसको उत्परिवर्तन गरि यसमा हमला गरिरहेका छौ । उदविकास का क्रममा प्राकृतिक चयन सिद्धान्त अर्थात अस्तित्वका लागि प्रयत्नको सिद्धान्त अनुसार कोरोना भाइरस उत्परिवर्तन प्रक्रिया विरुद्ध पुन सक्रिय भएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताए । यो खोज कोविड १९ विरुद्धको नयाँ खोप बनाउन सहयोगी हुन सक्ने बताइएको छ ।
शुक्रबार यि काम गर्दा चम्किन्छ तपाईको भाग्य, अपनाउनुहोस् यि उपाय र बन्नुहोस् खुशी